အဖိနှိပ်ခံတို့ အသံ: February 2013
ရိုဟင်ဂျာ အရေးပေါ်လာတော့- ငါတို့ကို မြန်မာနိုင်ငံသားတွေက ၀က်သား စားတဲ့ အခွင့်အရေး ပျောက်ဆုံးနေတာ သတိထားမိလာတာ သေချာတယ်၊ ဒီမှာ ငါတို့ ကို နား လည်ပေးသူ လူတစ်စု၊ ပညာရှင် တစ်ချို့ ရှိနိုင်သလို- ၀က်သားစားသုံးမူကို နားလည်မှု လွဲမှားနေတဲ့ လူသားအများအပြားလည်း ရှိနေမှာသေ ချာတယ်။
အထူးသဖြင့် မတော်မတရားသော တစ်ဘက်သတ်ဝါဒဖြန့်မှုများကြောင့် ငါတို့က အာရပ်နိုင်ငံများကို အတင်းအဓမ္မ ၀က်သားစားသုံးနိုင်အောင် လုပ်မယ်လို့ ၀ါဒဖြန့်ချီထားကြတယ်။
ငါတို့ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတာ မတော်မတရား ဖိနိပ်ခံထားရတဲ့ လူမျိုးဖြစ်တယ်
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ ၀က်သားစားသူနဲ့မစားသူ အတူတူဖြစ်စေရမယ်။ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမရှိစေရဘူးလို့ ငါတို့ရဲ့ ကမ္ဘာ ခေါင်းဆောင်တွေက တောင်းဆိုလိုက်တယ်။
မြန့်မာ ခေါင်းဆောင်များ ကလည်း ၀က်သားကို ပေါ်ပေါ်တင်တင်စားသုံးနိုင်ရန် တောင်းဆိုလိုက်တယ်။ မူဆလင်နိုင်ငံများ အထိ ၀က်သားကို လွတ်လပ်စွာ တင်ပို့ ရောင်းချခွင့်ကို လည်း ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားများ ထံ တောင်းဆိုပါတယ် ။
၀က်သားစားသုံးခွင့်ကို ပိတ်ပင်ထားခြင်း ဟာ Individual Right ကို ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ အာရပ်နိုင်ငံများ နဲ မူဆလင်ကမ္ဘာအားလုံး ၀က်သားစားခွင့် ရရန် သံတမန်နည်း နဲ့ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းသွားမှာဖြစ်တယ်။ ၀က်သားအမြဲစားသုံးသူကို ၀က်ပုတ် ။ ကြက်သားစားသူကို ကြက်မ။ ဘဲသားစားသူကို ဘဲကြီး၊ ခွေးသားစားသုံးသူကို ခွေးသား၊ ကြောင်သားစားသုံးသူ ကို ကြောင်မ လို့ နာမ်နိမ်ခေါ်တဲ့ အကျင့် ကို ဥပဒေအရ ပြင်းပြင်းထန်ထန် အရေးယူ သွားတဲ့ အထိ တော်လှန်တိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်တယ်။ အထူးသဖြင့် ရိုဟင်ဂျာတွေ နေထိုင်တဲ့ဒေ သမှာ အစားအသောက်ရှားပါးခြင်းကြောင့် ၀က်သား ခိုးဝှက်စားသုံးခြင်း ရှိနေတာကို လစ်လျုမရူပဲ ဥပေက္ခာ မပြု ပဲ အတင်းအဓမ္မ နိမ်နင်း ခြင်း ကို ဆန့်ကျင်သွားမှာပဲ ဖြစ်တယ်။ ၀က်သားကို အာရပ် နိုင်ငံများ အထိ တင်ပို့ရောင်းချတာ ကို ပိတ်ပင်ထားသူ မည်သူမဆို ငါတို့ ရဲ့  ရန်သူများဖြစ်တယ်။ စာသင်ကျောင်းတွေမှာ ၀က်သားစားသူ မစားသူများ ခွဲခြားဆက်ဆံတာတွေ၊ ၀က်သားမစားသူတွေ ကို မျက်နှာသာပေး ဆက်ဆံတာတွေကို ဆန့်ကျင်သွားမယ်။ ၀က်သားစား နိုင်အောင် လှုံဆော်ပေးတဲ့ ပညာရေးမူဝါဒတွေချမှတ်နိုင်အောင်၊ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်နိုင်အောင်လို့ ကြိူးပမ်းမှာပဲဖြစ်တယ်။ ၀က်သားမစားအောင် လူထုကြားမှာ မီဒီယာနဲ့ မိူင်းတိုက်တာတွေ ၊၀ါဒဖြန့်ချီတာတွေ၊ဟောပြောတာတွေကို တန်ပြန်တိုက်ခိုက်မှာဖြစ်တယ်။ရိုဟင်ဂျာသာမက တစ်ခြား မည်သည့်တိုင်းရင်းသား လူမျိုးကိုမဆို ၀က်သားမစားနိုင်အောင် မတော်မတရားဖိနိပ်ထားမယ်ဆိုရင် ဖိနိပ်ခံရသူဘက်က တော်လှန်သွားမယ် ၊ အသက်ကိုစွန်လွှတ်ရသည့်အထိ နောက်ဆုံးထွက်သက်အထိ တိုက်ခိုက်သွားမယ် ၊ နှစ်ပေါင်းခြောက်ဆယ် ၀က်သားမစားခဲ့ရသည့်အတွက် လက်စားချေလိုစိတ်များ မထားဖို့ ၊ အမုန်းဓါတ်ခံတွေ ပယ်ရှားဖို့ ငါတို့ ခေါင်းဆောင်တွေ က တိုက်တွန်းထားတယ် ။ ငါတို့ဘက်က လည်း စိတ်ဓါတ်ရေးရာတွေပြောင်လည်းဖို့ဆောင်ရွက်မှာပဲဖြစ်တယ်။ဒါ ဟာ ငါတို့ ဘက်က ဆုံးဖြတ်ချက်များဖြစ်တယ်။ ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသား များ နှင့် မူဆလင်များ ဟာ ၀က်သားကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် စားသုံးနိုင်ဖို့ မည်သည့် ခရစ်ယာန် သင်းအုပ်ဆရာမဆို။ မည်သည့် ဗုဒ္ဒဘာသာရဟန်းတော်များနှင့် မဆို နိုင်ငံတော် အစိုးအရ အဖွဲ့  အုပ်ချူပ်သူများနှင့်ဆွေနွေးတိုင်ပင်ဖို့ ငါတို့ဖက်က လမ်းဖွင့်ပေးထားပါတယ်။
Posted by danyawadi on February 3, 2013 in Articles
ရိုဟင်ဂျာ အရေးပေါ်လာတော့- ငါတို့ကို မြန်မာနိုင်ငံသားတွေက ပိုပြီးသတိထားမိလာတာ သေချာတယ်၊ ဒီမှာ ငါတို့ ကို နား လည်ပေးသူ လူတစ်စု၊ ပညာရှင် တစ်ချို့ ရှိနိုင်သလို- နားလည်မှု လွဲမှားနေတဲ့ လူသားအများလည်း ရှိနေမှာသေ ချာတယ်။ အထူးသဖြင့် မတော်မတရားသော တစ်ဘက်သတ်ဝါဒဖြန့်မှုများကြောင့် ငါတို့က မြန် မာ နိုင်ငံကို အတင်းအဓမ္မ အစ္စလာမ် သာသနာပြုမယ်၊ ကုလားကြီးစိုးရေးတွေကို လုပ်မယ်၊ အကြမ်းဖက်တိုက် ခိုက်မယ်- ဆိုတာတွေက လူထုကြား မှာ မိုးမွှန် နေ ပါတယ်။– ဒီတော့ ငါတို့အနေနဲ့ မြန်မာလူထုကို ငါတို့ရဲ့ ရည်ရွယ် ချက် ဘာလဲ၊ ငါတို့က ဘာကြောင့် ကမ္ဘာ့ အဆက်အသွယ် များ၊ ပညာများ၊ ငွေကြေးများ၊ နည်းပညာများကို စု ဆောင်း ခဲ့ပါသလဲ- ဘာအတွက်လဲ ဆိုတာ လူထုအနေနဲ့ ပွင့်ပွင့်လင်း လင်း သိဘို့ လိုအပ်ပါမယ်။ (၁) ငါတို့ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတာ မတော်မတရား ဖိနှိပ် သုတ်သင်ခံနေရတဲ့ လူမျိုး ဖြစ်တယ်၊ ဒီလို မတရားသဖြင့် ဖိနှိပ်ခံ ရခြင်းမှ လွတ်မြောက်အောင် ရုန်းကန်လှုပ်ရှားမယ်။ မြန်မာလူထု အနေနဲ့ အမှန်ကို အမှန်အတိုင်း သိမြင်လာအောင် ရုန်းကန်လှုပ် ရှားမယ်။
Posted by Wai Lin Aung at 4:34 PM
အို အဖ ဗိုလ်ချုပ်
တို့အဖမှာ ဓါး တုတ်ကို စွဲ
ခုနေခါများ မွေးလာငြား မူ
အဖဗိုလ်ချုပ် ဘာကို လုပ်မည်
ခေတ်၏ အရေး ခေတ်ကပေးတဲ့
တောင်သူလယ်သမား ဆင်ရဲသား ထံ
အမောင်တို့ သိ ငါ့ သတ္တိ။
ပြည်ထောင်စုသား ညီနောင်များ တို့
မူဝါဒနှင့် ကွဲပြား နေလစ် စုစည်းဖြစ်အောင်
သမိုင်း ထင်ရှား သင့်စွမ်းအား။
ခုနေခါများ အခွင့်ထား မူ
ဘင်္ဂလား နယ် အနီးဝယ်က တို့သွေး တို့သား
ညီနောင်များအား မီးရှို့ သတ် လု
သွေးနှောပြုတဲ့ မုဒိန်း ရိုဟင်ဂျာ ဦးစားပေးကာ
စိတ်ဝယ် မှတ်ထား တိုင်းရင်းသား။
သုံးကျိပ် ရဲဘော် အပေါင်းဖော် ကို
မော်ကွန်းရေးထိုး နိုင်ခဲ့ သည်။
အဖ ဗိုလ်ချုပ် ဘာကိုလုပ်မည် သိချင်ပါသေး မေးချင်သေး။
ညီနောင်တို့ အား သိစေသား။
အင်္ဂလန်သွား ဖော်သင်းများနှင့် ဟန်ချက်ညီညီ
အက်တလီ စာချုပ် ယခုချက်ချင်း
တောင်းဆိုခဲ့ပြန် သင့်အားမာန် ပြည်သူ့ထံ မှာ မမေ့သေး။
ခုနေခါများ သင် ပြန်ဖွားသော်
တို့တိုင်း တို့ ပြည် တို့ ဌာနီသည်
ခုလိုပြောကြား သင့်စကား အထင်အရှား ရှိ ပြီးသား။
ခရိုနီ အပေါင်း ပွားစည်းကြောင်း
အသွယ်သွယ်ကို ပြည်သူနှင့် ကြည်ဖြူ လက်တွဲကူလို့
ဖြုတ်ချ နိုင်ရေး နည်းလမ်းပေးမည် သမိုင်းပေးတဲ့ တာဝန်မို့။
ခြံကိုစိုက်စား သမီးသားများနှင့် စာရေးကာရယ်
ခုလိုပြောကြား သင့်စကား သနားပါဘိ ကြားယောင်မိ။
အို ပြည်ထောင်စုဖွား တိုင်းရင်သားတို့
ဆုံးရူံးနေသေး လူ့ အခွင့်အရေး
ဒို့ပြည်သူ ကုစား ပေးရန် ငါကြံဖန်မည်
လူဝါးဝ သူ မည်သူ့ကို မဆို ငါလျှင်
အသက် မငဲ့ကွက်ပဲ တိုက်ထုတ်ပါမည်။
သွေးသည် သစ္စာ ငါ့ခန္ဓာ။
ကိုယ်စား ခံစားရေးဖွဲ့ပါသည်။ ဖေဖော်ဝါ ရီ ၁၃ ရက်နေ့ ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ တွင် အမှတ်တရ
Posted by Wai Lin Aung at 11:25 PM
Posted by Wai Lin Aung at 10:10 AM
You are requested not to play golf at Mingalardon Garden City Golf Course. MGCG Course is built on sweats, troubles and tears of the farmers. Course-founder captured the fields for his own benefit. Disputes between course-founder(Zaykabar Company) and farmers are still solving that concerns farm problems. So, don't cheer playing up that MGCG Course if you love the farmers and if you understand justice.
For the SEA GAMES golf tournament, SEA GAMES celebration committee is too requested to choose others golf courses in Yangon, Naypyidaw, Mandalay and Pyin Oo Lwin except MGCG course.
(Please share for quick spread knowing by using several ways as you like.)
ဂေါက်သီးအားကစားသမားများ၊ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံခြားသားများခင်ဗျား။
မင်္ဂလာဒုံဥယျာဉ်မြို့တော် ဂေါက်ကွင်းတွင် ဂေါက်သီးရိုက်ကစားခြင်းမပြုရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ မင်္ဂလာဒုံဥယျာဉ်မြို့တော်ဂေါက်ကွင်းသည် တောင် သူလယ်သမားတို့၏ ချွေး၊ ဒုက္ခ နှင့် မျက်ရည်များပေါ်တွင် တည်ဆောက် ထားသောကွင်းဖြစ်ပါသည်၊ ဂေါက်ကွင်းတည်ထောင်သူ(ဇေကမ္ဘာကုမ္ပဏီ) နှင့်လယ်သမားများအကြား လယ်ယာမြေပြဿနာနှင့် ပတ်သက်၍ အဖြေ ရှာနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင်တို့သည် တရားမျှတမှုကိုနားလည်သူ၊ တောင်သူလယ်သမားများကို ချစ်ခင်တတ်သူများဖြစ်ကြလျှင် မင်္ဂလာဒုံ ဥယျာဉ်မြို့တော်ဂေါက်ကွင်းတွင် အားပေးကစားခြင်းကို မပြုကြပါနှင့်။
အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲအတွက်၊ ပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးကော် မတီ အနေဖြင့်လည်း မင်္ဂလာဒုံဥယျာဉ်မြို့တော်ဂေါက်ကွင်းမှလွဲ၍ ရန်ကုန်၊ နေပြည်တော်၊ မန္တလေးနှင့် ပြင်ဦးလွင်မြို့တို့ရှိ အခြားသောဂေါက်ကွင်းများကို သာ အသုံးပြုပါရန်လည်း မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
(မြန်ဆန်ကျယ်ပြန့်စွာသိရှိကြရန်အတွက် သင်နှစ်သက်ရာနည်းလမ်းကိုသုံး၍ မျှဝေအသိပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်)
Nyo Min Lwin-PMA 10.2.2013.
Posted by Wai Lin Aung at 7:07 AM
ပြစ်မူမထင်ရှား သရွေ့ အပြစ်မဲ့ တယ် လို့ သတ်မှတ်နိုင်ပေမဲ့ ပြစ်မူထင်ရှားပြီး ပြစ်ဒဏ် မခံ ရသေးတာတွေကို လည်း တာဝန်ယူ ဖမ်းဆီးပေးနိုင်တဲ့ လူအဖွဲ့ အစည်းကို ထူထောင်ရပါမယ်။ သို့မှသာ တာဝန်ယူတတ်တဲ့ လူအဖွဲ့ အစည်းဖြစ်လာမှာ မလွဲမသွေပါပဲ ။ ယခင်စစ်အစိုး ရနဲ့ ခရိုနီများဟာ နင် ကအကောင် ကြီးလို့ နှစ်ခါ ပြန်လျောက် လို့ စေခိုင်း ပြီး ပြုတ်ကျမှ သတ်စားတဲ့ အကျင့် ကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ကြသူတွေပါ။ ပြောရရင် မတရားပေမဲ့ တရားဝင်အောင် လုပ်တတ်ကြပါပေတယ်။ တရားဥပဒေ နဲ့ အမှန်တရားပေါ်ကို နင်းလျောက်တတ်သူများ ဆို တာ ကို ဒေါ်အောင်စုကြည်အနေနဲ့သတိပြု ရပါလိမ့်မယ်။ ခရိုနီများကို အသုံးချ ဖို့ လိုတယ် ဆိုတာလက်ခံနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အသုံးချ ခံ ပြန်မဖြစ် အောင် လည်း ၀ိုင်းဝန်းကြိုးစားရပါမယ်။ လာဘ်ပေးတာ လက်မခံ ပေမဲ့လက်ဆောင်ပေးတာကို လက်ခံတတ်တဲ့ လူအဖွဲ့ အစည်း အဖြစ် စနစ်တကျ ရှောင်တိမ်းတတ်တဲ့ ခောတ်ဟောင်း အုပ်ချူပ်မူ ပုံစံကို ဆက်လက် လက်ခံမယ်ဆိုရင် ပြည်သူအတွက် ထူးမခြားနား ပါပဲ လို့ ပြောရစေ။ အုပ်ချုပ်သူ လူတန်းစာ က ပေးနိုင်တဲ့ အခွင့် အရေးအမျိုးမျိုးကြောင့် အုပ်ချူပ်သူအကြိုက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကို လုပ်သယောင် ထိုးကျွေး ဥပမာ စာသင်ကျောင်း ဆောက်ပေးတာမျိုးကို ဆိုလိုသည် ။ အုပ်ချူပ်သူကိုလည်း လက်ဆောင်ပေး ။ နောက် ဒေသခံ ပြည်သူများဆီ က ရနိုင်လောက်တဲ့ အခွင့်အရေးမှန်သမျှ အကုန်ယူ ။ အာဏာရှိ လူ တန်းစား ကို သူတို့ လက်ထဲ မှာ ၊
သူ တို့ ခါးပိုက် ထဲ မှာ ရှိနေသယောင် အယောင်ဆောင် ။ ဘာမှ မသိနားမလည်းတဲ့ပြည်သူ ကို ခြိမ်းခြောက် အနိုင် ကျင့်တာတွေ များလှပါပြီ ။ဘယ်သူ့ ကိုမှ တိုင်လို့မရတဲ့ ပြည်သူလူထုရဲ့ဘ၀ က ကယ်သူ ကူသူမရှိ။ အို ဒီမို အမေရယ် ပြစ်မူမထင်ရှားပေမဲ့ ခံစားနားလည် နိုင်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။ ပြစ်မူထင်ရှားသူများ ကို အပြစ်ပေးပါ။ ပြစ်မူမထင်ရှားရင်လည်း ဖော်ထုတ်ပါ။ ဆင် ကောင်ကြီးတွေ့နေပြီးမှ ဆင်ခြေရာ မတွေ့ လို့ ပြစ်မူမထင်ရှားရင် လည်း ဆင်ကြီး တစ်လှမ်းထပ်လျှောက်တိုင်းဆင်ခြေရာ တွေ့မှာပါ အသေအချာပါ ။ အဲသည့် ဆင်ခြေရာကို အသေအချာစောင့်ကြည့်ပေးပြီး တွေခဲ့ ရင်လည်း နှာစည်း မနေပါနဲ့ လို့သာ ဆိုပါရစေတော့ လို ဆိုပါရစေ ဒီမို အမေရယ်။
Posted by Wai Lin Aung at 12:16 AM
လွှတ်တော် အမတ်မင်း ခရိုနီ ခင်ရွှေ ၏ ကျဆုံးခန်း အကြို နေ့ရက်များ
ခရို နီ ဦးခင်ရွှေကို ထွက်ပေါက်ပေးထားသည်မှာ ကြာမြင့်ပြီ ဖြစ်ပါသည် ။ လယ်သိမ်းခံ တောင်သူကြီးများ၏ နစ်နာချက်ကို ကုစားပေးရန် ၊ အရင်းသေ လှုပ်ရှားမဲ့ သို့ ထုတ်ကုန်မဲ့ လယ်ယာများ မှ ထိုက်သင့် သည့် ကုန်ထုတ် အင်အားစုများ ပြန်လည် ရရှိအောင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် အလို့ငှာ နိုင်ငံတော် နှင့် ခရိုနီတစ်ဦး ဖြစ်သော ဦးခင်ရွှေကို တင်ပြထားပြီးလည်းဖြစ်ပါသည်။ လွှတ်တော် ကိုယ်စာလှယ်များနှင့် နိုင်ငံတော် သမ္မတ ရုံး ထံ သို့ လည်း တင် ပြထား ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအပြင် သိမ်းဆည်းခံ တောင်သူများအတွက်ဖွဲ့ စည်း ထားသော လယ်ယာမြေ စုံစမ်းရေးကော်မရှင် ထံသို့ လည်း တင်ပြထားပြီး ဖြစ်ပါသည်.။
မိမိတို့ အတွက် အနည်းငယ်မျှသော နစ်နာချက်များရှိသည်ဆိုစေ နှစ်ပေါင်းများစွာ နစ်နာ ဆုံးရှုံးခဲ့ ရသော တောင်သူ လယ်သမား များ နှင့်စာလျှင် ပြောပလောက် ခြင်းမရှိနိုင်ပါ။ လူသားပီပီသသ နေနိုင်ရေးနှင့် နိုင်ငံတော် ၏ သိက္ခာ ကို ပြန်လည် အဖတ်ဆယ်နိုင်ရေးအတွက် အဖက်ဖက်က ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် နေသော ဦးနေမျိုးဝေ (မတူကွဲပြားခြင်း နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ) ၏ မူဝါဒများကို လည်း အခါသင့်တိုင်း ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတော် ကို လယ်ယာမြေ အရှုတ်အထွေး တစ်မျိုးကို သာတင်ပြခြင်း မဟုတ်ပါပဲ ရှင်းလင်းရန် နည်းလမ်းများလည်း အကြံပြု တင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
ယခုအခါ ခရိုနီ ဦးခင်ရွှေ ၏ တုန့်ပြန်ချက်မှာ ကြမ်းတမ်း ရိုင်းစိုင်းယုတ်မာ လှပါသည်။ လယ်သိမ်းခံ တောင်သူများအနေဖြစ် မတူ ကွဲပြားခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ ၏ ဦးဆောင်မူဖြင့် လည်း စုံစမ်းရေး ကော်မရှင် လာရောက် စုံစမ်း ခြင်း မရှိသရွေ့ မိမိတို့ ပိုင်ဆိုင်သော လယ်ယာမြေများမှ တစ်ဖ၀ါး မှ မခွါ ပဲ အသက်စွန့်တော့မည် ဟု ဆုံးဖြတ်ထားကြပါသည်။
မလိုလားအပ်သော အခြေ အနေ မှ လွန်မြောက်နိုင်ရန် အလိုငှာ တင်ပြရခြင်း ဖြစ်ပါသည် ပြည်သူလူထုကြီးခင်ဗျာ။
++++++ ++++++++++ +++++++++++++++ ++++++++++++
ကြာသပတေးနေ့ ကနေစပြီး လယ်သမားတွေကို ရိုက်နှက်မယ် ခုတ်ထစ်မယ်
မဖယ်ပေးရင် သူ့အလုပ်သမားတွေကို ဓါးကော တုတ်ကောသုံးပြီးချခိုင်းမယ် ၊
အဲဒါကို ရဲတပ်ဖွဲ့က သိနေလို့ ရဲတပ်ဖွဲ့အင်အားလည်းဖြည့်တင်းထားတယ်လို့ ရဲတွေဆီကကြားရတယ် ။
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်မှူးကတော့ နှစ်ဘက်ခုတ်ထစ်တဲ့သူတွေ သေရင်သေစာရင်းပို့ မိရင်ဖမ်းလို့ ညွှန်ကြားထားပါတယ် ။
ဘယ်သူလွန်သလည်း သိစေဖို့ ၁၀၃ မျက်နှာ စာအုပ်ကိုဖတ်ပါ
ရဲတပ်ဖွဲ့ ၀င်တွေကတော့ ဘယ်ဘက်ကိုမှ မလိုက်ပါဘူး တကယ်ချရင် ချတဲ့လူကို ဖမ်းမှာပါ ။ လောလောဆယ်တော့ လုံခြုံရေးအင်အားတိုးထားပါတယ် ။
အဓိကရုန်းဖန်တီးမည့်နေရာ ရွှေနံ့သာကွင်း - ဇေကမ္ဘာ၀င်း အမှတ် ၃ လမ်းမှ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးရုံးဘေးလမ်း terminal စက်သုံးဆီဆိုင်ညာဘက်ဘေးက လမ်းကျယ်ကြီး က၀င်ရပါမယ် ။ ၀င်ပြီးရင် ဘယ်ဘက်လမ်းကျောအတိုင်းတည့်တည့် မောင်းလာပါ ။
ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်တဲ့ဖုန်း - ဦးနေမျိုးဝေ - 098610719 /09421148275
အောင်မျိုးဦး - 09421056231
နောင်တော်လေး - 09401601220
အောင်ချစ် - 0949773248
ဇော်ကြီး - 09420044721
ကိုနေမျိုးဝေ ၏ ဖေ့ဘုတ် မှ ကူးယူထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။(စာရေးသူ၏ မှတ်ချက်)
လွှတ်တော် ကိုယ်စာလှယ်ကြီး ဦးခင်ရွှေ ၏ နောက်ဆုံး ဇတ်သိမ်းပိုင်းဖြစ်ပါသည်။ ခမည်းခမက်ကြီး လည်း ကယ်တင်နိုင်ရန် လုံးဝ မစွမ်းဆောင် နိုင်တော့ပါချေ.။ မကြာ မီ ကာလအတွင်း ခမည်းခမက် ကြီး လည်း နောက်ဆုံးခန်းရောက်လာ ပါတော့မည်။ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မည် ဟု တရားဝင် စစ်ကြေညာ လိုက် သော ဦးခင်ရွှေ၏ နောက်ဆုံး တိုက်ပွဲ ။ လယ်သိမ်းခံ တောင်သူ ဦး ကြီးများ၏ နောက်ဆုံး တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
ဦခင်ရွှေသည် နိုင်ငံတော် တည်ဆောက်ရေးအတွက် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်နေရာ ကို ရအောင် ယူထားခြင်းမျိုးမဟုတ်ပါပဲ။ မိမိတစ်ဦးတစ်ယောက် ချမ်းသာ အောင်မြင်ရေးသာ လျှင် ရှေ့ရူ တတ်သော လူစားမျိုးဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားပေသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ နိုင်ငံတော်၏ အကျိုးစီးပွားကို စောင့်ရှောက်သော ပြည်သူ အပေါင်း၏ အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက် သူသာလျှင် အောင်မြင်မည်ဖြစ်ကြောင်း တထစ်ချ ယုံကြည်မိပါသည်။ မည်သူမဆို ကိုယ်သမိုင်း ကိုယ် ကိုယ်သာလျှင် ရေးထိုးကြရမည် ဖြစ်ပါသည်။
အပြည့်အစုံ ကို သိလိုလျှင် စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ 103 မျက်နှာ ရှိ သည့် ဇေကမ္ဘာနှင့် မင်္ဂလာဒုံမြို့ နယ်တွင်ရှိသော လယ်ယာမြေများ အကြောင်းကို အကြံပြု တင်ပြခြင်း စာအုပ် ကြီးကို ဖတ်လိုလျှင် မှာလိုက်ပါ ဗျို့  ။ ပို့ပေးပါမည်။
အမှတ်(၁၄၉၄) ပြည်ထောင်စုလမ်း (၂၄)ရပ်ကွက် ၊ဒဂုံတောင်
Posted by Wai Lin Aung at 3:17 PM
ပြည်သူလူထုကြီးခင်ဗျာ မူဆလင်များနှင် စကားရည်လုပွဲ ကျင်ပမည်ဖြစ်ပါသောကြောင့် ၀က်နှင့်ပတ်သက်သော မည်သည့် အစားအသောက်မဆို ချက်ပြုတ်တတ်သူ အလိုရှိပါသည်။ မက္ကာသို့ အသွားအပြန် အခမဲ့ ခရီးစဉ်လိုက်ပါခွင့် ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ စကားရည်လုပွဲ သို့ တက်ရောက် ကြမည့် မြန်မာများအတွက် စားသောက်ရန် ချက်ပြုတ်ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါပွဲ တွင် ၀က် နှင့် ပတ်သက်သော အစားအသောက် ချက်ပြုတ် ပြိုင်ပွဲ ပါ ၀င် မည် ဖြစ်သလို ၄င်းဒေ သတွင်နေထိုင်သော ၀က်သားမစားသူများအား ချက်ပြုတ်ပွဲတွင် ပါဝင်စေပြီး ။ ၀က်သားချက်ပြုတ်စားတတ်ရန် သင်ကြားပေးရမည်ဖြစ်သလို ၀က်သားဟင်း ချက်ပြုတ်စားသောက်နည်း နှင့် ၀က်တစ်ကောင်လုံးအသုံး ပြုပုံ ကို ပရက်ဆန်တေးရှင်း (Presentation) ပြုလုပ်ရမည်လည်းဖြစ်ပါသည်။ ရိုဟင်ဂျာအားမြန်မာတိုင်းရင်းသားအဖြစ် လက်ခံသင့် မသင့် -ဟုတ်မဟုတ် စကာရည်လုပွဲ ဖြစ်သော်လည်း မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးမော့လာစေရန်ရည်ရွယ်လျက် စီးပွားရေး အခွင့်အလမ်း သစ် အဖြစ် ၀က်ကို ပြည်ပပို့ကုန် အဖြစ်တင်သွင်းနိုင်ရန်ထူးခြား အစီအစဉ်အသစ်ကို ထည့် သွင်းထားခြင်းလည်းဖြစ်ပါသည်။ စကားရည်လုပွဲကုန်ကျစရိတ်ကို ဦးဆောင်ကျင်ပသူ မွတ်ဆလင်များ က ကျခံမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကြောင့် လူများများလိုက်နိုင်လေ အကျိုးရှိလေဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါပွဲတွင် ၀က်နှင့်ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းအမျိုးမျိး ဖြစ်သည့် ထုတ်လုပ် ရောင်ဝယ် ကုန်သွယ် ၀က်ပေါ်သည့် စသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ရှင်းလင်းတင်ပြနိုင်သူများ စရိတ်မဲ့သွားပြန်နိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းကောင်းလည်းဖြစ်ပါသည်။ ၀က်နှင့် ပတ်သက် သော သာရေစာအမျိုးမျိုး ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းမှ သည် ၀က်သားဆီပတ်ထုတ်လုပ်ခြင်း ။၀က်ဆီ ထုတ်လုပ်ခြင်း စသည့်ဝက်နှင်ပတ်သက်သော ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းရှင်အမျိုးမျိူး အလိုရှိပါသည်။ ဆက်သွယ်၇န် ဖုန်းနံပါတ်မှာ ၀၉၄၃၀၉၃၅၉၁ ကိုဧည့်သည်
Posted by Wai Lin Aung at 11:53 PM
The Hot News Weekly Journal | Tag Archive | ဆောင်းပါး
Posted by Wai Lin Aung at 8:33 PM
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ ၀က်သားစားသူနဲ့မစားသူ အတူတူဖြစ်စေရမယ်။ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမရှိစေရဘူးလို့ ငါတို့ရဲ့ ကမ္ဘာ ခေါင်းဆောင်တွေက တောင်းဆိုလိုက်တယ်။မြန့်မာ ခေါ်င်းဆောင်များ ကလည်း ၀က်သားကို ပေါ်ပေါ်တင်တင်စားသုံးနိုင်ရန် တောင်ဆိုလိုက်တယ်။ ၀က်သားစားသုံးခွင့်ကို ပိတ်ပင်ထားခြင်း ဟာ Individual Right ကို ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ အာရပ်နိုင်ငံများ နဲ မူဆလင်ကမ္ဘာအားလုံး ၀က်သားစားခွင့် ရရန် သံတမန်နည်း နဲ့ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းသွားမှာဖြစ်တယ်။ ၀က်သားအမြဲစားသုံးသူကို ၀က်ပုတ် ။ ကြက်သားစားသူကို ကြက်မ။ ဘဲသားစားသူကို ဘဲကြီး၊ ခွေးသားစားသုံးသူကို ခွေးသား၊ ကြောင်သားစားသုံးသူ ကို ကြောင်မ လို့ နာမ်နိမ်ခေါ်တဲ့ အကျင့် ကို ဥပဒေအရ ပြင်ပြင်ထန်ထန် အရေးယူ သွားတဲ့ အထိ တော်လှန်တိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်တယ်။ အထူးသဖြင့် ရိုဟင်ဂျာတွေ နေထိုင်တဲ့ဒေ သမှာ အစားအသောက်ရှားပါးခြင်းကြောင့် ၀က်သား ခိုးဝှက်စားသုံးခြင်း ရှိနေတာကို လစ်လျူ မရူပဲ ဥပေက္ခာ မပြု ပဲ အတင်းအဓမ္မ နိမ်နင်း ခြင်း ကို ဆန့်ကျင်သွားမှာပဲ ဖြစ်တယ်။ ၀က်သားကို အာရပ် နိုင်ငံများ အထိ တင်ပို့ရောင်းချတာ ကို ပိတ်ပင်ထားသူ မည်သူမဆို ငါတို့ ရဲ့  ရန်သူများဖြစ်တယ်။ စာသင်ကျောင်းတွေမှာ ၀က်သားစားသူ မစားသူများ ခွဲခြားဆက်ဆံတာတွေ၊ ၀က်သားမစားသူတွေ ကို မျက်နှာသာပေး ဆက်ဆံတာတွေကို ပညာရေးမူဝါဒတွေချမှတ်နိုင်အောင်၊ ဖော်ဆောင်နိုင်အောင်လို့ ကြိူးပမ်းမှာပဲဖြစ်တယ်။ ၀က်သားမစားအောင် လူထုကြားမှာ မီဒီယာနဲ့ မိူင်းတိုက်တာတွေ ၊၀ါဒဖြန့်ချီတာတွေ ၊ ဟောပြောတာတွေကို တန်ပြန်တိုက်ခိုက်မှာဖြစ်တယ်။ရိုဟင်ဂျာသာမက တစ်ခြား မည်သည့်တိုင်းရင်းသား လူမျိုးကိုမဆို ၀က်သားမစားနိုင်အောင် မတော်မတရားဖိနိပ်ထားမယ်ဆိုရင် ဖိနိပ်ခံရသူဘက်က တော်လှန်သွားမယ် ၊ အသက်ကိုစွန်လွှတ်ရသည့်အထိ နောက်ဆုံးထွက်သက်အထိ တိုက်ခိုက်သွားမယ် ၊ နှစ်ပေါင်းခြောက်ဆယ် ၀က်သားမစားခဲ့ရသည့်အတွက် လက်စားချေလိုစိတ်များ မထားဖို့ ၊ အမုန်းဓါတ်ခံတွေ ပယ်ရှားဖို့ ငါတို့ဘက်က စိတ်ဓါတ်ရေးရာတွေပြောင်လည်းဖို့ဆောင်ရွက်မှာပဲဖြစ်တယ်။ဒါ ဟာ ငါတို့ ဘက်က ဆုံးဖြတ်ချက်များဖြစ်တယ်။ ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသား များ နှင့် မူဆလင်များ ဟာ ၀က်သားကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် စားသုံးနိုင်ဖို့ မည်သည့် ခရစ်ယာန် သင်းအုပ်ဆရာမဆို။ မည်သည့် ဗုဒ္ဒဘာသာရဟန်းတော်များနှင့် မဆို နိုင်ငံတော် အစိုးအရ အဖွဲ့  အုပ်ချူပ်သူများနှင့်ဆွေနွေးတိုင်ပင်ဖို့ ငါတို့ဖက်က လမ်းဖွင့်ပေးထားပါတယ်။
Posted by Wai Lin Aung at 8:44 AM